Ongakwenza ukugwema ukudunwa imoto
Fanelesibonge Bengu | June 1, 2021
ISIKHULU seMasterDrive, u-Eugene Herbert, sithi ukunyuka kwesibalo sokudunwa kwabantu izimoto kumele kwenze abashayeli babe mehlomane kakhulu kunakuqala.
UHerbert uthe izibalo zobugebengu zaphakathi kukaJanuwari noMashi 2021 zehle ngo-14.4%. Uthe okukhathazayo wukuthi kunyukile ukudunwa kwezimoto namaloli. Ukudunwa kwezimoto kunyuke ngo-4.9% kuthi okwamaloli kwanyuka ngo-24.6%.
"Ukudunwa kwabantu izimoto kulokhu kunyuka njalo uma kukhishwa izibalo zobugebengu. Lesi sigameko esihlukumeza umoya futhi esidla imali yinto okubonakala sengathi abantu bakuleli ngeke basibone sehla maduze. Kubalulekile ukuthi abashayeli bakuvume ukuthi ukuze bagweme ukugilwa kuncike ekutheni bamehlomane kanjani futhi bazi nokuthi yini okumele bayenze uma bebona sengathi basengozini. Ukuhlale wazi ukuthi kwenzakani eduze kwakho kubalulekile, ukuze ungagilwa."
Uthe eGauteng, KwaZulu-Natal naseWestern Cape kube nezigameko eziningi. Abantu badunwa kakhulu emalokishini yize umehluko umncane. Izimoto ezingama-sedan, hatchback, amaveni yizo ezidunwa kakhulu.
"Uma wazi ukuthi ushayela imoto edunwa kakhulu ezindaweni eziyingozi kubalulekile ukuthi uhlale wazi ukuthi ngubani oshayela emva kwakho nokuthi unesikhathi esingakanani ekhona. Ungalokothi ujike esangweni lakwakho noma endaweni engenamuntu uma kunemoto elokhu ikulandela. Qaphela abantu abaseduze kwesango lakho uma uhamba noma ubuya futhi uma kukhona umuntu osolisayo thinta amaphoyisa kunokuthi ushayele yize kukhona ongakuboni kahle. Yima eceleni nesango usalinde livuleke."
Uthe okunye wukuthi enxanxatheleni yezimoto paka uhlehlele odongeni ukuze kungavumbuki muntu ngemuva kwakho uma usalayisha izimpahla.
"Uma kungekho muntu endaweni yokupaka, cela unogada akuphelezele uye emotweni. Ezimpambanweni zomgwaqo qaphela abantu abazimele. Ungalokothi uzivimbe uma usezimpambanweni zomgwaqo noma erobhothini kodwa shiya isikhala phambi kwakho nemoto oyilandelayo ukuze uchushe kalula."